के यो’नीको आकारले यौ’न सन्तुष्टिमा फरक पर्छ ? थाहा पाउनुहेास । – Sidha Post 24
व्यक्तिपिच्छे मानिसको अनुहार आकारप्रकार फरक फरक हुने गर्छ । सबै मानिसहरुको आकारप्रकार र रुप एकै हुने गर्दैन । ठीक यही कुरा यो’नी अर्थात् महिलाका प्रजनन अंगको मुख्य भागको हकमा पनि लागू हुन्छ । महिलाको यो’नीको आकारले के फरक पर्छ ? यो युगौंदेखि उठ्दै आएको प्रश्न हो । यो प्रश्नबारे बढी चासो राख्नेहरुमा पुरुष रहने गर्छन् तर स्वयं महिलाको हकमा पनि यो कुरा कम चासोको विषय चाहिँ होइन ।
‘‘यौ’नक्रियामा योनीको आकारको सम्बन्धका बारेमा बुझ्ने हाम्रो क्षमतालाई सही ढंगले बुझिएको छैन’’, क्रिस्टोफर टार्नेले वेवमेडसँगको कुराकानीमा यसो भन्छन् । उनी उक्ला मेडिकल सेन्टरका फिमेल मेडिसिन एण्ड रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी विभागका डाइरेक्टर हुन् । उनका अनुसार ‘‘बितेका १० देखि १५ वर्षमा यौ’न औषधी विज्ञानका क्षेत्रमा धेरै चासोहरु दिइएका छन् ।
सुन्दै पनि आइरहेका छौँ आखिर किन पुरुषहरूले आँखा लगाउँछन् त विवाहित महिलालाई जान्नुहोस् कारणयदि कुनै विवाहित महिला आफ्नो सबै काम सही ढंगमा गर्छिन् र सधैँ अनुहारमा मिठो मुस्कानका
यी युवतिले एक्लै रुममा हुदा यस्तो सम्म गरेपछी…..(हेर्नुस भिडियो)